Samee Qorshahaaga Joojinta - 802Quits
Bogga ugu weyn » Vermonters » Waxaan rabaa inaan joojiyo » Samee Qorshahaaga Joojinta
QORSHE LAGU QAADO
Fursadahaaga inaad si guul leh uga joojiso tubaakada way fiicnaaneysaa marka aad leedahay qorshe la joojiyay.
Sidee ugufiican ee looga joojiyaa sigaar cabista, uus uus ama waxyaabaha kale ee tubaakada? Ma jirto hal waddo oo sax ah oo lagu joojiyo. Haddii aad isku dayday hal waddo oo hore oo ay shaqeyn weyday, tixgeli inaad isku daydo waddo kale. Waxaan kugula socon doonnaa siyaabo aad ku dhisi karto una adeegsan karto qorshahaaga joojinta shaqsiga ah.
Joojinta waa adag tahay, laakiin
waxay sare u qaadeysaa guushaada. Buuxi 6 tallaabo oo sahlan oo aad ku heli karto qorshahaaga joojinta shaqsiga ah. Abuur qorshahaaga joojinta adoo raacaya talaabooyinka hoose. Waad soo dejisan kartaa, daabici kartaa kuna dari kartaa qorshahaaga joojinta jadwalkaaga taariikhda.
SOO SAAR TAARIIKHDAADA
Ku bilow inaad dejiso taariikhda aad joojineyso
Dooro maalin labada toddobaad ee soo socda gudahood. Tani waxay ku siin doontaa waqti kugu filan oo aad isku diyaariso.
Nikotiinka ayaa ka baxsan nidaamkaaga.
Calaamadaha ka bixida jirka way libdhaa.
Jaceylka ka imanaya kiciyaasha shucuurta iyo caadada ah ayaa sii socon kara.
DOORO SABABAHAAGA UGU DANBAYNTA
Waxaa jira sababo badan oo loo joojiyo cabbista sigaarka, sigaarka elektaroonigga ah (elektaroonigga ah) ama isticmaalka noocyada kale ee tubaakada. Dhammaantood way fiican yihiin. Xulo sababahaaga. Iyaga ayaa lagu dari doonaa "My Quit Plan" oo aad adigu habeysay.
Noqo mid caafimaad qaba
Si fiican u urin
Kuwa aan jeclahay
Ogaanshaha waxyaabaha kiciya ayaa kaa caawinaya inaad xakamayso. Marka ugu horeysa ee aad joojiso, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad gebi ahaanba ka fogaato waxyaabaha kiciya. Ka dib markii aad ka xayirayso tubaakada xoogaa, waxaad u heli kartaa habab kale oo aad ku maareyso waxyaabaha kiciya. Xulo waxyaabaha kiciya ee kugu sababaya inaad tubaako isticmaasho. Iyaga ayaa lagu dari doonaa qorshahaaga shaqsiyeed ee "My Quit Plan".
Qaboojinta dagaalka kadib
Qaadashada nasasho shaqo
Aadida xaflad bulsheed
Inaad aragto qof kale oo sigaar cabaya
U DIYAar garow inaad la dagaallanto curyaaminta
Jaahwareerku wuxuu soconayaa kaliya dhowr daqiiqo — laakiin daqiiqadahaas waa laga adkaan karaa. Xulo noocyada damacyada aad caadiyan qabtid. Tilmaamaha lagu garaacayo damacyadan waxaa lagu dari doonaa "Qorshahayga Joojinta" ee loogu talagalay.
Ma u baahan tahay inaad mashquuliso gacmahaaga iyo afkaaga?
Caws gacantaada ku hay oo ku neefso.
Ku ciyaar qadaadiic ama warqad-xaashi si ay gacmahaagu mashquul u noqdaan.
Ma u isticmaashaa tubaakada yareynta buuqa ama hagaajinta niyaddaada?
Ku celceli neefsashada qoto dheer si aad u dejiso ama aad u riixdo xoogaa si aad uumi afuufto.
U leexo asxaabtaada, qoyskaaga, iyo lataliyayaashaada markaad ubaahantahay qof aad lahadasho.
Miyaad dhib ku qabtaa mashquulinta iyo mashquulka maskaxdaada?
Samee liistada shaqooyinka aad ku guuleysan karto marka hammuunku ku dhaco. Liiskan waxaa ku jiri kara shaqooyinka, ka jawaabidda emaylka, socodsiinta shaqooyinka, ama qorsheynta jadwalkaaga maalinta xigta.
Miyaad dareentaa xanaaq iyo walaac la'aan sigaar?
Daaweynta beddelka nikotiinka (NRT), sida balastarrada, xanjada, ama lozenges, ayaa kaa caawinaya yareynta astaamahaaga bixitaanka. La hadal dhakhtarkaaga si aad u aragto nooca NRT ee adiga kugu habboon.
Tubaakada ma u isticmaashaa xoojinta tamarta?
Si heerka tamartaadu u ahaado mid deggan, samee jimicsi joogto ah oo cun cuntooyin fudud oo caafimaad qaba maalintii oo dhan.
Hubso inaad hurdo badan heshid habeenkii si ay kaaga caawiso inaad gaabis dareento maalintii.
Ma u isticmaashaa tubaakada maadama ay tahay wax lagu farxo oo lagu nasto?
Ku daawee naftaada raaxo ka duwan. Dhageyso heesaha aad ugu jeceshahay, la qorsheyso habeen filimo asxaabtaada ama keydso sigaarkaaga, sigaarka elektaroonigga ah, tubaakada canka la dhigo ama lacagta buuriga lagu cabo si loogu siiyo daaweyn gaar ah marka aad gaarto taariikhi aan tubaako lahayn.
KA QAADO XUSUUSNADA TABAABA
Marka la arko xusuusinta tubaakada waxay adkeyneysaa in laga fogaado tubaako. Ka takhalus wixii xusuusin ah ee gurigaaga, baabuurkaaga iyo goobta shaqada ka hor maalinta aad joojiso. Hoos waxaa ku yaal liiska xusuusiyeyaasha guud iyo sida loola macaamilo. Liiskan waxaa lagu dari doonaa "My Quit Plan" oo aad adigu habeysay.
Diyaar u noqo inaad joojiso
Dhaq dharkaaga, gaar ahaan jaakad aad uxirto si aad uhesho qiiqyada qiiqa.
Ka takhshiir kabriidka, haashtariga, iyo qiiqyada sigaarka ee ka baxsan gurigaaga.
Ku rid waxyaabaha aad ku dagaallameyso - sida caws, xanjada nikotiinta, ama liistada shaqooyinka - meelaha aad ku keydisay sigaarkaaga, haashkaaga, kabriidka, dabka, iyo laydhleyda.
KU JOOJI CAAWIMADA DHEERAAD AH
802quits.org waxay leedahay qalab fara badan oo sahlaya joojinta. Baadh khayraadkan oo xulo kuwa aad xiiseyneyso. Iyaga ayaa lagu dari doonaa qorshahaaga gaarka ah ee "My Quit Plan" oo ay ku jiraan macluumaad ku saabsan sida loo isticmaalo.
Wac 1-800-QUIT-NOW caawimaad joojinta ku habboon oo bilaash ah oo loogu talagalay tababbarka hal-hal-hal. Tababbarayaasha Quitline waxaa la heli karaa 24/7, oo leh taageero dheeraad ah emayl iyo qoraal. Waxaa ku jira balastarro bilaash ah, xanjo iyo lozenges.
Jooji Qof ahaan
Ka hel caawimaad ka joojinta Vermont Quit Partners taageero yar yar oo faca kooxeed ah. Kulamada toddobaadlaha ah ee 4 ilaa 6 toddobaad ayaa laga heli karaa gobolka oo dhan. Waxaa ku jira balastarro bilaash ah, xanjo iyo lozenges.
Jooji khadka tooska ah
Barta 802quits.org, iskood iskaga bax adoo kaashanaya aaladaha internetka iyo ilaha sida looxyada fariimaha. Waxaa ku jira balastarro bilaash ah, xanjo iyo lozenges.
Isticmaalka daawooyinka iyo / ama daaweynta beddelka nikotiinta (NRT) waxay hagaajin kartaa fursadahaaga inaad sigaar joojiso si wanaagsan. La hadal daryeel caafimaad bixiyahaaga si aad u ogaato xulashooyinka adiga kugu habboon.
U sheeg asxaabta iyo qoyska.
Joojinta tubaakada way fududaanaysaa markaad taageero ka hesho kuwa aad jeceshahay.
Mawduuca laga soo qaatay ogolaanshaha Machadka Kansarka Qaranka iyo Smokefree.gov